Hordhac:Man city Vs Brighton and Hove Albion: City Oo Ah Kooxda Ugu Goolasha Badan Horyaalka Garoonkeeda – Kooxda.com
Home 2018 May Ingiriiska, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino Hordhac:Man city Vs Brighton and Hove Albion: City Oo Ah Kooxda Ugu Goolasha Badan Horyaalka Garoonkeeda
Hordhac:Man city Vs Brighton and Hove Albion: City Oo Ah Kooxda Ugu Goolasha Badan Horyaalka Garoonkeeda
Kooxda Man City ayaa ciyaari doonta kulankii ugu horeeyay kadib markii ay gudoontay koobka Premier League kuna dabaal degtay Axadii iyaga oo markan marti galin doona kooxda Brighton kulan baaqi u ahaa labada kooxood.
City ayaa bar-baro la gashay kooxda Huddersfield kulan ka dhacay Etihad waxana ay doonaysaa in ay ku soo laabato wadada guulaha si ay u sii raadiso rikoorada ay jabinayso.
Dhanka kale kooxda Brighton ayaa sabtidii si Rasmi ah u xaqiiqsatay in ay ku sii negaan doonto horyaalka premier Leageu xilli ciyaareedka dambe kadib markii ay guul ka gaartay Man United.
Kulanka: Man city Vs Brighton and Hove Albion
Wakhtiga: 10:00 Haneenimo
Manchester City Ayaan Marti Galin kooxda Brighton & Hove Albion kulan horyaalka ah tan iyo September 1988 markaas oo ay City 2/1 uga badisay Brighton goolal ay u dhaliyeen xiddigaha Ian Brightwell & Paul Moulden.
Todoba kulan oo hore oo ay Brighton booqatay Man City waxa ay ku fashilantay in ay wax guul ah ka gaarto iyaga oo 2 bar-baro galay sidoo kale laba laga badiyay booqashadii hore ee Etihad Stadium.
Brighton ayaan wax guul ah gaarin kulamadii mininka martida iyo Mirtida 17 jeer oo ay isku dayday tartamada oo dhan.
Man city ayaa ah kooxda ugu goolasha badan horyaalka marka laga hadlayo garoonkooda iyaga oo dhaliyay 58 gool halka Brighton tahay kooxda ugu yar ee garoonkeeda goolal ku dhalisay kuwaas dhaliyay 9 gool.